Belize sy Costa Rica dia mamaly ny fepetra CDC vaovao amin'ny dia any Etazonia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Belize sy Costa Rica dia mamaly ny fepetra CDC vaovao amin'ny dia any Etazonia
Nampitombo ny fanandramana COVIDE-19 i Jamaika
Rehefa mitohy mihazakazaka any Amerika ny trangan'ny COVID-19, dia namorona protokolônika vaovao ho an'ny rehetra miditra amin'ny firenena ny CDC US. Ny mpitsangatsangana rehetra izao dia takiana hampiseho porofo amin'ny fitsapana COVID-19 ratsy alohan'ny hanombohan'ny dia. Manomboka mandray andraikitra ireo firenena manerantany.
Nanambara ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) omaly fa mitaky fanandramana ratsy COVID-19 avy amin'ireo mpandeha rehetra tonga tany Etazonia nanomboka ny 26 Janoary 2021. Androany dia nanambara ny tetikasan'izy ireo i Belize sy Costa Rica ho valin'ity vaovao ity Fepetra takiana CDC amin'ny dia any Etazonia.
Ho setrin'izany fitakiana CDC vaovao, ny Birao Fizahan-tany Belize (BTB), taorian'ny fifampidinihana tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana any Belize, dia nanamafy fa hitarina ny fitsapana ary ho azon'ny mpandeha rehetra hiainga any Belize ho any Etazonia.
Ny antsipiriany misimisy momba ny vidiny sy ny toerana fanandramana manerana ny firenena no tapa-kevitra. Ny olona rehetra izay mikasa ny hitsidika an'i Belize dia afaka manohy ny drafitra fitsangatsanganany, noho izany.
Ny Biraon'ny fizahantany Belize dia manaiky fa ny mpitsangatsangana amerikana dia manodidina ny 70% ny mpitsidika ny firenena. Nilaza ny Birao fizahan-tany fa hitarika hatrany amin'ny alalàn'ny protokolà fahasalamana handray ireo mpitsidika rehetra ary hiantohana ny traikefa azo antoka manomboka amin'ny fahatongavanao ka hatramin'ny fiaingana.
Nizara ny Ivontoerana Fizahan-tany any Costa Rican: “Tombantombana fa ny governemanta ny Etazonian'i Amerika afaka mandray fepetra tahaka izao, nanangana vondrona miasa izahay izay miara-miasa amin'ireo laboratoara tsy miankina voamarina avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana hitantanana ny fitsapana RT-PCR any Costa Rica. Ny drafitra dia ny hananan'ireo fitsapana ireo mpitsangatsangana amerikana sy mpizahatany firenena hafa manerana ny firenena, latsaky ny $ 100 isanisany.
“Miaina areti-mandringana izao tontolo izao izay ny fironana dia ny mandray andraikitra ary manitsy ny fanovana eo am-pitetezana. Costa Rica dia toeran-kaleha nanolo-tena hanaraka ny mason-tsivana momba ny fahasalamana, ary misaotra ireo mpandeha izahay noho ny fahatokisany. ”
Tonga ity vaovao ity satria saika nitombo avo roa heny ny fahatongavan'i Costa Rica tamin'ny Novambra hatramin'ny Desambra. Tamin'ny Desambra 2020 no nisoratra anarana ny fidiran'ny mpizahatany 71,000 an-habakabaka, efa ho avo roa heny ny fitsidihana voasoratra tamin'ny Novambra 2020, izay nahitana 36,044. Ny fiakarana dia vokatry ny fiverenan'ireo zotram-piaramanidina 20 avy amin'ny tsenan'ny fizahantany lehibe ao Costa Rica sy ny fanambaràna làlana vaovao amin'ny faran'ny taona.
Meticore South Africa FAMERENANA 2021 - Fanafody fanalefahana lanja na SCAM
Iza ireo mpanao didy jadona? Governemanta, media sosialy sa roa?